Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Iftin Xagardheere oo Shalay Nabad Kudhamaaday.
Shirkii Faraca Iftin Xagardheere oo Shalay Nabad Kudhamaaday.
Posted by Dulmane	/ July 18, 2016
Waxaa xerada qoxootiga Xagardheer ee deeganka Faafi shalay oo ay taarikhdu kubeegantahay 18th June 2016 kaqabsomay shirkii faraca Iftin, Shirkan oo furmay abaarihii 9:30am xiliga Bariga Afrika ayaa waxaa kasooqayb galay dhamaan xubnaha faraca intooda badan iyo masuuliyiin katimid faracyada kale ee Dhadhaab.
Shirkan oo lagu furay sidii cadada ahaydba aayado quraanka kariimka ah kamid ah ayaa waxaa furay gudomiyaha faraca mudane Abdullahi Badal una akhriyey xubnaha qodobada shirka kadibna waxuu gudomiyuhu ku sodhaweyay Sh Ahmed sh Husein oo aad ugu adkeeyey xubnaha taqwada Rabbi iyo laazimitaanka daacada Alle.
Kadibna waxaa madasha warbixin aad udheer oo isugu jirta dagaalada Ogadenia kasocda, tacatiyo iyo Niyad jabka iyo kala baxsadka ciidanka gumaysiga Itoobiya kasoojeediyey mudane Abdirahman Bacley, waxaakalo qodob abaabul ah kunuux nuuxsaday xubno gudida faraca katirsan iyo masuul katirsan G/Dhexe ee JWXO Waxayna xubnaha waydiiyeey iyagoo hadana u sharaxay su ‘aalo kusabsan halganka iyo dhulka Ogadeniyaba.
waxaa kale oo shirka warbixin aad udheer oo ay si adag ugu oomanaayeen xubnuhu soojeediyey gudomiyaha (chairman) qoxootiga Ogadeniya (ORCC) Mudane Daahir mohamed Ali warbixinta ayaa kusabsanayd xaalada qoxootiga ee murugsan iyo bulshada ree Ogadenia waxa ay Hay’adu kamaagan tahay madaama oo lacelinayo qoxotiga kale gaar ahaan qoxotiga Somaliyeed.
Waxuuna jeermanku sheegay in aan marnaba aynan ku jirin dadka lacelinayo bulshada ree Ogadenia sida Hay’adu sheegtayna meel uun lagayndoono lkn aan wali lacayimin meesha lagayn doono.
Guntii iyo gunaanadkii Shirka ayaa kusodhamaday jawi dagan iyo waliba sinabad ah.